हुवावेमाथि विश्वभर शंका- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
नराम्रो चित्रित गरिए सेवा हटाउने हुवावेको चेतावनी
माघ १३, २०७५ एजेन्सी
काठमाडौँ — चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावे पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको विषय बनेको छ । धेरै देशले हुवावेको उत्पादनप्रति सुरक्षा चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसै साता जर्मनीले यो चिनियाँ कम्पनीलाई फाइभ जी नेटवर्कको विस्तारको काम नदिने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
डावोसमा जारी वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा बोल्दै चिनियाँ कम्पनी हुवावेका अध्यक्ष लियाङ हुवाले पश्चिमा देशले आफ्नो कम्पनीलाई नराम्रो चित्रित गरिरहे त्यस्ता देशबाट सेवा हटाउने चेतावनी दिए । ‘जहाँ हाम्रो स्वागत हुन्छ, त्यहाँ हामी प्रविधि स्थानान्तरण गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी जहाँ पनि नियम पालना गर्छौं ।’
अमेरिकी सरकारले हुवावेले आफ्नो व्यापारको गोपनीयता हनन गर्दै आएको आरोप लगाएको छ । कम्पनीको आर्थिक प्रमुख मेङ वाङजाओ क्यानडास्थित निवासमै नजरबन्दमा छिन् । धेरै देशले के आरोप लगाएका छन् भने चीनले
आफ्नो देशको टेलिकम सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी हुवावेले प्रतिस्पर्धी देशको जानकारी हासिल गर्नका लागि उपयोग गरिरहेको छ । यसको विपरीत हुवावेले भने आफू स्वतन्त्र कम्पनी भएको र सरकारलाई करबाहेक कुनै जानकारी नदिने गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
चीनका ठूला कम्पनी र व्यापारमासरकारको प्रभाव रहने गरेको भन्दै विज्ञहरूले भने हुवावेको स्वतन्त्रताप्रति शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक भएको तथ्यअनुसार हुवावेका संस्थापक रेङ जेङफेई चीनका पूर्वसैनिक र कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य पनि हुन् ।हुवावेले भने आफू चीनको कम्पनी भए पनि सरकारसँग कुनै नाता नजोडिएको स्वतन्त्र कम्पनी भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
हुवावेले आफूलाई नयाँ प्रविधिको अनुसन्धानमा विश्वकै सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने कम्पनी भएको दाबी पनि गर्छ । सन् २०१७ मा मात्रै कम्पनीले अनुसन्धानका लागि १३ अर्ब डलर बढी खर्च गरेको थियो । सन् २०१८ मा यो रकम झन् बढी छ । तर, हुवावेका विरोधीहरूले के दाबी गर्छन् भने सरकारको निर्देशनअनुसार हुवावेले आफ्नो डिभाइस र सफ्टवेयर ह्याक गर्न मिल्ने, कुराकानी रेकर्ड गर्न मिल्ने बनाएको हुन सक्छ जसले हुवावेको नेटवर्क प्रयोग भएको टेलिकम सेवा असुरक्षित हुनसक्छ ।
चीनले विश्वभरका देशमा सेवा विस्तार रहेको हुवावेजस्ता कम्पनीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न देला ? भन्नेमा धेरैको शंका छ । दूरसञ्चार उपकरण उत्पादकबाहेक हुवावेको अर्को परिचय स्मार्टफोन निर्माताको पनि छ । यो विश्वको दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन निर्माता हो ।
बेलायतले पूर्ण रूपमा हुवावेका सामानमा प्रतिबन्ध नलगाएको भए पनि कम्पनीका उपकरणमा बेलायती संस्थाहरूले निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छन् ।
हुवावेकी उपाध्यक्ष तथा आर्थिक अधिकृत मेङ केही महिनाअघि क्यानडामा पक्राउ परेकी छन् । अमेरिकी अनुरोधमा उनी पक्राउ परेको क्यानडाले बताएको छ । अदालतको आदेशअनुसार उनी अहिले घरमै नजरबन्दको अवस्थामा छिन् र देश छोड्न प्रतिबन्ध छ ।
क्यानडाका सरकारी वकिलहरूले उनलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा मेङले स्काइकम नामक सहायक कम्पनी मार्फत सन् २००९ र २०१४ सम्ममा इरानमा लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दीविरुद्ध काम गरेको आरोप लगाएका थिए । अमेरिकी कानुनअनुसार त्यहाँ सेवा दिइरहेका कम्पनीले अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाएको देशमा कुनै पनि सेवा दिन पाउँदैनन् ।
कुन कुन देशमा समस्या ?
नोभेम्बर २०१८ मा न्युजिल्यान्डले फाइभ जी नेटवर्कका लागि हुवावेको उपकरण प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो ।
अमेरिका र अस्ट्रेलियाले यसअघि नै फाइभ जी नेटवर्क विस्तार गर्न हुवावेको उपकरण प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।
क्यानडाले पनि हुवावेका सामान सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
बेलायतको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ब्रिटिस टेलिकमले पनि फाइभ जी नेटवर्क विस्तारका लागि हुवावेको सामान प्रयोग नगर्ने भएको छ ।
डिसेम्बरमा युरोपियन युनियनका दूरसञ्चार आयुक्त एन्ड्रुस अन्सिपले चिनियाँ उत्पादकको उपकरण प्रयोग गर्दा सचेत रहनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
जर्मनीका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले पनि फाइभ जी नेटवर्क विस्तारका क्रममा चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा विचार गरिने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
अक्टोबर २०१२ : अमेरिकाको संसदीय समितिद्वारा अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेटीई सरक्षा चुनौती भएको धारणा सार्वजनिक ।
जुलाई २०१३ : हुवाले चिनियाँ सरकारलाई विवरणहरू उपलब्ध गराउँछ भनी अमेरिकी गुप्तचर निकायले लगाएको आरोप कम्पनीद्वारा खण्डन ।
अक्टोबर २०१४ : अमेरिकी सरकारी टेन्डरमा भाग लिन प्रतिबन्ध । तर, प्रतिबन्ध महत्त्वपूर्ण नभएको हुवावेको प्रतिक्रिया ।
१९ जुलाई २०१८ : हुवावेको उपकरणका कारण सुरक्षा चुनौती नहुने सम्भावना थोरै रहेको बेलायती सरकारी प्रतिवेदनमा भनाइ ।
३० जुलाई २०१८ : एप्पललाई उछिन्दै हुवावे विश्वकै दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन उत्पादक कम्पनी ।
२३ अगस्ट २०१८ : हुवावे र जेटीईलाई आफ्नो देशमा फाइभ जी विस्तारको काममा प्रतिबन्ध लगाउने अस्ट्रेलियाको घोषणा ।
२८ नोभेम्बर २०१८ : फाइभ जी विस्तारको काममा हुवावेलाई सहभागी नगराउने न्युजिल्यान्डको घोषणा ।
१ डिसेम्बर २०१८ : हुवावेकी प्रमुख आर्थिक अधिकृत मेङ क्यानडामा पक्राउ ।
७ डिसेम्बर २०१८ : क्यानडाको अदालतमा भएको सुनुवाइका क्रममा मेङलाई अमेरिकी अनुरोधमा पक्राउ गरिएको खुलासा ।
२४ डिसेम्बर २०१८ : ब्रिटिस टेलिकमद्वारा आफ्नो कोर नेटवर्कबाट हुवावेका सामान हटाउने घोषणा ।
४ जनवरी २०१९ : आइफोन प्रयोग गरी ट्विट गर्ने हुवावेका दुई कर्मचारी कारबाहीमा ।
१२ जनवरी २०१९ : चिनियाँ सरकारका लागि गुप्तचरी गरेको आरोपमा पोल्यान्डमा पक्राउ परेका आफ्ना कर्मचारी हुवावेद्वारा बर्खास्त । आफ्नो निर्देशनमा गुप्तचरी नगरेको कम्पनीको दाबी ।
१५ जनवरी २०१९ : हुवावेका संस्थापक रेङ जेङफेईद्वारा आफ्नो कम्पनीले सरकारलाई गुप्चतरीका लागि सहयोग नगर्ने दाबी ।
१६ जनवरी २०१९ : अमेरिकी व्यापार साझेदारका व्यापारसम्बन्धी गोप्य विवरण हुवावेले चोरी गरेको भन्दै अमेरिकी सरकारले अनुसन्धान थालेको वालस्ट्रिट जर्नलद्वारा खुलासा ।
१७ जनवरी २०१९ : अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा हुवावेबाट कुनै पनि सहायता र प्रायोजन नलिने घोषणा ।
२२ जनवरी २०१९ : डाभोसमा जारी वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा बोल्दै हुवावे अध्यक्ष लियाङ हुवाद्वारा हुवावेलाई नराम्रो चित्रित गरिरहे पश्चिमा देशबाट आफ्नो सेवा हटाउने चेतावनी ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७५ ०९:४३
अपर तामाकोसीको मात्र ४८ करोडको कारोबार
काठमाडौँ — यो साता बजारमा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । कुल कारोबारमा करिब ३२ प्रतिशत हिस्सा जलविद्युत् समूहले ओगट्यो ।
सामान्य अवस्थामा कारोबार हिस्सा बढ्नुको अर्थ ती कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढनु नै हो । यद्यपि यो साता कारोबारको प्रकृति हेर्दा सबै जलविद्युत् समूहको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेकाले हिस्सा बढेको होइन । ठूलो संख्यामा अपर तामाकोसीको सेयर कारोबारबढेकै कारण जलविद्युत् समूहको हिस्सा बढेको हो ।
यो साता अपर तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीको मात्र करिब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यो साताको कुल कारोबारका करिब ३२ प्रतिशत हो । अघिल्ला सातामा कुल कारोबारमा जलविद्युत् समूहको हिस्सा ५ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदै आएको थियो ।
त्यसो त अपर तामाकोसीको कारोबारमा आकर्षण बढ्नुको विशेष कारण केही छैन । यो कम्पनीको बारेमा बजारमा विभिन्न किसिमको हल्ला फैलाइएको छ । त्यही हल्लाको भरमा परेर लगानीकर्ताले लगानी बढाएकाले कारोबार हिस्सा धेरै देखिएको एक धितोपत्र ब्रोकरले बताए । ‘पहिलो कारोबार पनि धेरैमा भयो । त्यसपछि नेप्सेको सिस्टममा समस्या आएपछि एकै दिन धेरै कारोबार भयो ।
अनि कम्पनीले लाभांश वितरणका लागि समिति गठन गरेको हल्ला चलाइयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तै हो भने अझै पनि अपर तामाकोसीको सेयरमा धेरै लगानीकर्ता डुब्ने सम्भावना धेरै छ ।’ बजारमा कम्पनीको वास्तविक अवस्था नबुझी हल्लाको भरमा लाग्ने लगानीकर्ताको जमात धेरै भएकाले बेला बेलामा यस्ता घटना देखिंदै आएको उनले दोहोर्‍याए ।
अरूको देखासिखिमै लगानी निर्णय गर्ने लगानीकर्ताकै कारण कुनै कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ता धेरै झुम्मिँदा उक्त कम्पनीको सेयर अपेक्षाभन्दा धेरै माथि जाने अर्का एक ब्रोकरले बताए । ‘अपर तामाकोसीको सेयरमा सुरुदेखि नै लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको थियो । त्यही समयमा नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा समस्या आएकाले एकै दिन धेरै कारोबार भयो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, नेप्सेले त्यो कारोबार रद्द गर्‍यो । तर, पनि लगानीकर्तामा यो कम्पनीको सेयर मूल्य बढो रहेछ भन्ने भ्रमले अझै काम
गरिरहेको छ ।’ कुनै कम्पनी विशेषको सेयर मूल्य बढ्यो भन्दैमा त्यो कम्पनीलाई राम्रो मान्न नसकिने भएकाले लगानीकर्ताले कम्पनीको सबै पक्ष राम्रोसँग बुझेर मात्र लगानी निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७५ ०९:४१